Izimoto nezimoto zamadoda | Amadoda aSitayela
Iningi lamadoda, noma kukhona okuhlukile, sithambekele ekubeni ne- uthando olukhethekile lwento yonke enenjini namasondo ambalwa, ngakho-ke bekubalulekile ukuthi kuleli kona kube nesikhala esizinikezele emotweni esingajabulela kuyo njengezingane zangempela.
Lapha ungazitholela kusuka ku- izindaba zakamuva ezivela emhlabeni wezimoto, ezihlokweni ezithokozisayo ezimotweni ezihamba phambili, izithuthuthu noma konke okungaba nenjini futhi kungahle kuthakazelise ngandlela thile.
Izinhlobo zezimoto ezihamba phambili zaseJalimane
Ukukhuluma ngeJalimane bekulokhu kufana nokukhuluma ngezinhlobo zezimoto zaseJalimane. Ngokungafani namanye amazwe aseYurophu,…
Ngilahlekelwe izikhiye zemoto futhi anginayo ikhophi
Kunamacala amaningi lapho sizosebenzisa khona imoto yethu futhi nganoma yisiphi isizathu asinakho…
Ubuchwepheshe bamuva kwimishini yesithuthuthu
Por Amadoda aSitayela kwenza Unyaka we-1 .
Izwe lezithuthuthu lithuthuka ngokushesha, hhayi ngezitayela nosayizi kuphela, kepha futhi nangama ...
Por U-Alicia tomero kwenza iminyaka 2 .
Ukube bekufanele sikhethe izimoto ezihamba phambili emhlabeni, impela isithombe sethu sizobonakala ezimotweni zezemidlalo, ngezabo ...
Siyazi ukuthi izimoto zezemidlalo bezilokhu zihehe ukunakwa ngemiklamo yazo nokusebenza kwazo emgwaqeni. Kuningi…
Izinhlawulo ezivame kakhulu
Por UPaco Maria Garcia kwenza iminyaka 4 .
Kunazo zonke izinhlobo zonswinyo, okuyindlela yokuphendula enhlawulweni yomgwaqo ekhiqizwayo. Lapho iphutha ...
Ukunakekela imoto yakho ebusika
Isikhathi esibandayo sonyaka singenza umonakalo omkhulu emotweni. Ngemuva kwakho konke, amazinga okushisa aphezulu ngokweqile ...
Ungayivikela kanjani imoto yakho emakhazeni?
Ubusika sebufikile. Ngamazinga okushisa aphansi, kufanele kuthathwe ezinye izindlela ukuvikela izimoto zethu ekuhluphekeni ...
Yimaphi amasondo emoto yakho afanelekile?
Por UPaco Maria Garcia kwenza iminyaka 5 .
Uma imoto yakho idinga ushintsho lwamasondo, futhi unokungabaza mayelana nalawa afanele kakhulu, kunokuhlukahluka okuningi onakho ...
Kufanele uguqule nini amasondo emoto yakho?
Ingxenye eyisisekelo yakho konke okuzungeze ukuphepha nemoto yakho isimo samasondo….
Ungawonga kanjani uphethiloli emotweni yakho?
Yiziphi izindlela ezifanele zokonga uphethiloli emotweni yakho? Umnotho wephethiloli emotweni yakho munye ...
Ungayibuyekeza kanjani itilogi yemoto
Tricks ukuvimbela ingilazi kusuka fogging
Ungaba kanjani ne-100% ye-hydraulic steering?